Amboary haingana ny lokon'ny sary amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ahitsiho ny loko amin'ny sary amin'ny Photoshop ka hahatratrarana sary miaraka amin'ny loko madio sy voajanahary. Ny sary rehetra dia mila a retouch fototra hiantohana ny loko tsy ho very ary hanana ny estetika tadiavintsika amin'ny fomba matihanina.
Photoshop dia ny programa famerenana sary an-tsary quintessential izay mamela antsika tena zavakanto miaraka amin'ny sarinay. Miaraka amin'ity lahatsoratra hianaranao ny mamerina mametaka ny lokon'ny sary amin'ny fomba iray matihanina kokoa sy mahomby fahazoana sary amin'ny hatsarana kanto sy manintona kokoa.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hanatsarana ny lokon'ny sarinay dia ny manokatra azy io Photoshop ary manomboka mikorontana miaraka aminy. Ny tanjon'ny retouchantsika dia ny fahafahana loko marina ny sary amin'ny fomba voafehy kokoa.
1 Misafidiana faritra manokana amin'ny sary
2 Loko mety
3 Fanamboarana hafa
Misafidiana faritra manokana amin'ny sary
Rehefa mamerina mamerina sary isika dia tsy maintsy ataontsika foana izany amin'ny fifehezana ireo faritra izay hamboarintsika, ny mahazatra indrindra rehefa manomboka miara-miasa isika Photoshop dia ny famerenana amin'ny laoniny ny sary amin'ny ankapobeny. Amin'ity tranga ity dia hifantoka amin'ny a isika retouch amin'ny teboka manokana avy amin'ny sary.
Mamorona a saron-tava pamin'ny alàlan'ny fanindriana eo ambanin'ny baraovana Photoshop, ny hevitr'ity fizarana ity dia ny fisafidianana ireo faritra tadiavintsika retouch misarakaOhatra, raha te-hamerina hamerina ny fotsy isika dia ny fotsy ihany no hofidintsika miaraka amin'ity fitaovana ity. Ny fampiasana an'io fitaovana io dia misy mandoko toy ny borosy, aorian'ny fisafidianana dia tsindrio indray ilay kisary amin'ilay fitaovana sarontava sosona ary mahazo safidy isika.
Isika kely dia misafidy ireo faritra tiantsika hovana, raha vantany vao vita dia tsindrio ny kisary saron-tava ary ho hitantsika ny fomba hanjavonan'ny loko mena ary lasa voafantina. Mifarana avadika ny safidintsika fanindriana ny safidin'ny menu / avadika ambony.
Miaraka amin'ny safidy saron-tava mason-tsivana voafantina azontsika atao retouch loko manokana. Raha mijery akaiky ny safidin'ny fitaovana fanitsiana voafantina isika dia afaka mahita ny fomba misy menio misy loko isan-karazany, ny tsirairay amin'ireo loko azontsika atao ampifanaraho tsirairay.
Ny tsara indrindra, ny fampiasana tsara ity fitaovana ity dia: mamorona sosona fanitsiana maro Isaky ny loko ao amin'ny sary dia manitsy tsikelikely ireo loko amin'ny fomba manokana isika amin'ny fikitihana ny safidy loko isan-karazany izay mamela antsika hampiasa ny safidy fanitsiana mifantina.
Ny mahatsara ny fanitsiana sosona dia ny ahafahan'izy ireo manova masontsivana marobe amin'ny sary, afaka misafidy sy manova izay safidy rehetra ao anatin'ny sosona fanitsiana isika. Raha ny ohatra sary dia nisafidy ny ampahany ambony amin'ny sary izahay ary nanova ny loko amin'ny fampiasana ny fitaovana fandanjana loko.
Tao anatin'ny fotoana fohy dia nianatra nampiasa a dinamika amin'ny asa matihanina ao anatin'ny tontolon'ny retouching sary, mahatratra vokatra voafehy sy matihanina, isika no manapa-kevitra ny fanovana hatao amin'ny sary.
Raha te hianatra miasa matihanina Tokony hanomboka hampiasa ireo karazana fitaovana ireo isika satria ilaina ny fahalalana tsara ny fiasan'ny asa ampiasain'ny matihanina amin'ny sehatry ny famolavolana sy ny fakana sary. IRETO fitaovana tsotra Mahasoa antsika izy ireo amin'ny tetik'asa marobe satria ny zava-dehibe amin'ny fianarana mampiasa programa dia tsy ny fahafantarana ny fomba hamoronana vokatra iray fotsiny fa ny fahalalana tsara izay azontsika atao amin'ny fampifangaroana ny fahalalana rehetra ananantsika momba ilay programa .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Loko mety amin'ny sary amin'ny Photoshop
trucutu dia hoy izy:
Ahoana no ahitanao fa tsy mahavita manitsy ny lokon'ny loko ianao, wey?
Mamaly an'i trucutu
Adobe's Project Rush hanambatra ny fanovana horonantsary Cross-Platform